BUDDHIST TERMS' Dictionary: IGNOBLE PRACTICE - အဗြဟ္မစရိယ
IGNOBLE PRACTICE - အဗြဟ္မစရိယ
IGNOBLE PRACTICE Abrahmacariya
အဗြဟ္မစရိယ - မမြတ်သောအကျင့်၊ ယုတ်ညံ့သောအကျင့်။
မိန်းမနှင့်ယောက်ျား နှစ်ဦးသားတို့ ပျော်ပါးမှီဝဲသော မေထုန်အကျင့်ကို မမြတ်သောအကျင့်ဟု ခေါ်သည်။ ရဟန်းတို့သည် ထိုမေထုန်အကျင့်မှ ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ လူတို့အနေဖြင့် အခါအားလျော်စွာ ဆောက်တည်ကျင့်သုံးသော ရှစ်ပါးသီလ၊ ကိုးပါးသီလ၊ ဆယ်ပါးသီလတို့တွင် မေထုန်အကျင့်မှ ရှောင်ကြဉ်သော သိက္ခာပုဒ်တစ်ပါး ပါဝင်သည်။
Indulgence in sexual intercourse between man and woman is called an ignoble practice. Bhikkhus (and bhikkhunis) abstain from this practice. Layman also, when observing precepts, have to abstain from indulging in sexual intercourse, which is one of the moral precepts include both in the Uposatha Sila of eight precepts and the sila of ten precepts.